Hodan’s Story The phone call from Libya - Telling the Real Story
Hodan waxay timid iswiidhan qaxooti ahaan sanadkii 2003. Way dhistay isbadal waxayna abuurtay nolol dagan. Sanadkii 2014, waxay qaadatay shaqo lataliye ka shaqeysa qaxootiga dhibaataysan. Sheekooyinka ay sheegteen waxay ku tilmaameen waxyaabihii foosha xumaa ee safarka ay ku marayaan Liibiya iyo guud ahaan Badda Mediterranean-ka. Hodan weligeed lafteedu ma soo marin, maxaa yeelay diyaarad bay ku timid.
“Dad badan oo dhalinyaro ah ayaa soo maray argagax iyo kadeed. Qaarkood ayaa isdilay. Qaarkood waxay yihiin kuwa maskaxda ka jiran oo dawooyin la noolaada. Waxaan la kulmay haween aad u fara badan oo carruur dhaley oo aabayaashood aaney aheyn Soomaali. Ma garanayaan cidda ay aabeyaashu ahaayeen; Ragga Liibiya ayaa kufsaday. Markii qaxootiga da'da yar ee aan la shaqeynayay ay ii sheegeen sheekooyinkooda, waxaan dareemay murugo sida inay yihiin xubno qoyskeyga ka tirsan. ”
Kadib, maalin maalmaha ka mid ah, waxay ka soo wacday qof ehel ah oo dhalinyaro ah oo ay tahriibayaal ku hayaan Liibiya. Tani waxay ahayd bilowgii qarow toos ah oo loogu talagalay Hodan iyo qoyskeeda.
“Ma xasuusto taariikhda saxda ahayd ee ay dhacey, laakiin waxay ahayd 4-ta galabnimo. Waxaan la shaqeynayay qaxootiga waxaana uu ku celceliyay taleefan lambar aanan aqoon. Waxaan u maleeyay, 'Waa inaan u jawaabo tan. Ma aha tiro iswiidhish ah ama tiro soomaali ah. Wuxuu sheegay inuu joogo Libya uuna u baahan yahay $ 7,000..
Hodan argaggaxday. Waxay soo korsatay qaraabadan oo waxay dareentay inay aad ugu dhowdahay. Laakiin iyadu waligeed malayn inay samayn lahayd safarka khatarta ah. Iskusoo uruurinta, si dhakhso leh ayey u dhaqaaqday. Waxay faarujisay akoonkeedii bangiga waxayna wacday eheladeeda ku sugan Soomaaliya iyagoo weydiisanaya inay lacag ka uruuriyaan siideynta wiilka. Kaydkeedii iyo lacagtii ay ka heshay ehelka, waxay ku bixisay madaxfurasho lacageed. Laakiin iyada iyo qoyskeeduba way ogaayeen sida dadku ula dhaqmayaan tahriibiyaasha Liibiya waxayna ka cabsi qabeen in xubintooda qoys ka soo baxdo waayo-aragnimadiisa masiibo ee nolosha iyo gebi ahaanba.
“Waxaan ku noolaannay welwel iyo walaac badan. Maannaan cunin karin ama seexan karin, aad ayaan uga walwalay. Waan ogaa in la jir dilay maxaa yeelay waxaan ku arkay warbaahinta bulshada waxa ka socda Libya. ”
Aakhirkii waa la siidaayay silsilayaashii isaga oo doon lagu geliyay Yurub. Wuxuu yimid, laakiin wuxuu ahaa nin jaban, maskax ahaan iyo jir ahaanba, oo ah hooska naftiisa hore.
Hodan waxay aaminsan tahay in Soomaalida qurbaha ku nool ay qayb ahaan mas'uul ka yihiin baxsashada Soomaalida dalkooda ku nool oo dhawaan la kulma xaalado aad u xun oo naxdin leh iyagoo kusii jeeda Libya. Kuwa u adeegsada warbaahinta bulshada in ay ku dhejiso sawirada iyo sheekooyinka ee cagaar, qurux iyo soo dhaweyn Yurub waa qeyb ka mid ah dhibaatada. Si dhif ah (haddii ay waligood jiraan) waxay sharraxaan ama u muujiyaan dhibaatooyinka safarka ama dhibaatooyinka iyo culeyska maalinlaha ah ee ku noolaashaha masaafurinta. Qurba-joogta Soomaaliyeed waa inay joojiyaan marin habaabinta kuwa guriga ku nool, gaar ahaan kuwa da'da yar iyo kuwa rajo-qaba; Waa inay joojiyaan ku dhajinta sawirrada iyo sheekooyinka been abuurka warbaahinta bulshada, ayay tiri Hodan.